Dzimwe nguva ndinofunga kuti vaverengi veblog rangu vakanyatso kundiziva pamusoro pemakore. Nezuro ndakatumira blog kubvunza kana Obama aive anotevera Vista. Wow, chakasimudzira moto zvakadii! Iwo akateedzana ezvekutaura aive nehasha kubva kuruboshwe uye kurudyi zvekuti ndakaramba kutumira mazhinji emashoko. Yangu blog ndeye Kushambadzira uye Tekinoroji blog, kwete yezvematongerwo enyika blog. Kuseka kwangu kwaive nemaune uye